Lalao Fanao An-databatra Makedoniana Nahazo Laza Iraisampirenena noho ny “Tsipaipaika Ifarimbonana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2017 4:57 GMT
Mpilalao amin'ny “Cavern Tavern” noforonin'i Txe Mico, nahazo alalana avy amin'ny Final Frontier Games ny famoahana azy.
[Raha tsy misy ny fanondroana manokana, dia mankany amin'ny tranonkala amin'ny teny Anglisy avokoa ny rohy rehetra]
Ahoana no nahavitan'ireo vondrona tanora avy amin'ny tanàna kely mahantra iray nanatanteraka ny nofin'izy ireo hivarotra lalao fanao an-databatra eo amin'ny sehatra manerantany? Tamin'ireo start-up (Aingavaon'orinasa) Makedoniana roa farahakeliny, nipoitra tamin'ny taona 2016 tao amin'ny Kickstater, dia ny sehatra fanangonam-bola ifarimbonana no valin'izany.
Nahangona 33 000 dolara Aostraliana mahery (eo amin'ny 25 300 euro) ny Archona Games mba hanamboarana ny lalaony fanao an-databatra amin'ny endrika tantara haifamoronana “Small Star Empires” ary nahazo 107 000 dolara Amerikana mahery (eo amin'ny 100 000 euro) kosa ny Final Frontier Games mba hanamboarana ny lalao nofinofisiny antsoina hoe “Cavern Tavern.” Nihoatra lavitra tamin'ny tanjona napetrany ireo orinasa roa ireo.
Noho izany fahombiazana izany, nampahafantatra ny lalana nodiavin'ny Final Frontier Games ny fandaharana lehibe iray amin'ny fahitalavitra Makedoniana fanaovana adihevitra sy fanadihadiana antsoina, raha amin'ny teny malagasy, hoe Tampon-dohahevitra eo anilanao [mk]. Mampiseho ny tantaran'izy ireo miaraka amin'ny dikan-tsoratra amin'ny teny Anglisy ny lahatsary eto ambany.
Niresaka tamin'ny Global Voces mikasika ny tetikasan'izy ireo ihany koa i Vojkan Krstevski, iray amin'ny efatra mpamorona ny Final Frontier Games, ary nampahatsiahy ny taona sy ny fitaovana nampiasan'ny ekipany tamin'ny fikarakarana ny fanentanana tao amin'ny Kickstarter sy tamin'ny fandraisana an'i Txe Mico, iray tamin'ireo Makedoniana mpanao sarisary mahay indrindra hiasa ao amin-dry zareo.
Tamin'ny famoahana ny fanentanana nataon'izy ireo, namaritra ambaratongam-panomezana efatra ny Final Frontier Games. Voalohany, afaka manome iray dolara (Amerikana) ny mpandray anjara. Faharoa, izay manome dimy dolara dia asaina mitroka ny endrika “PnP” (Print and Play na ataovy printy ary milalaova). Fahatelo, ireo izay manome efatra amby efa-polo dolara dia hahazo ny dikamitovy iray amin'ny lalao. Ny ambaratonga fahaefatra, voafetra ho 42 ny isan'ny fanomezana 119 dolara, ahafahan'ny mpividy hahazo ny dikamitovy iray amin'ny lalao sy manome anarana ny iray amin'ireo fangaron-karatra amin'ny lalao.
Ny karatra Cavern Tavern noforonin'i Txe Mico, navoaka tamin'ny fahazoan-dalana avy amin'ny Final Frontier Games.
GV : Iza no nanohana ny lalaonareo tao amin'ny Kickstarter ? Ahoana no fandehan'ny fanomezana isaky ny ambaratonga ?
Vojkan Krstevski (VK) : Amin'ny fisafidianana ny ambaratonga iray, dia miditra amin'ny fampandrosoana ny lalao ny mpandray anjara. Mihevitra izy ireo fa azy ireo ny lalao ary mandray anjara amin'ny fahombiazan'ny fanentanana. Araka izany, lasa mpampiroborobo ny lalao ireo mpandray anjara. Tsy mora anefa izany, nila nanao paikady ara-barotra mazava izahay dimy volana talohan'ny famoahana ny fanentanana sy iray volana talohan'ny fiafaran'izany, indrindra indrindra raha tetikasanao voalohany ao amin'ny Kickstarter ilay izy: tsy maintsy miezaka hiavaka amin'ireo tetikasa an-jatony hafa ao ianao.
Farany, nahazo mpandray anjara roa arivo izahay nahazoana fanomezana hatramin'ny 107 966 dolara. Avy any Etazonian'i Amerika ny atsasany, 30% tany amin'ny Vondrona Eoropeana, ary avy amin'izao tontolo izao ny ambiny: Shina, Japana, Polynezia Frantsay, Brunei, Iran, Afrika Atsimo, Shily, Arzantina, Brezila… Raha ny marina, ny firenena rehetra manerantany. Afa-po sy faly tanteraka izahay nanambatra olona marobe, tsy miankina amin'ny fivavahana, na rafitra politika na volon-koditra izany hamatsiana ara-bola ny hevitry ny ekipa Makedoniana.
Isan-taona, maharay fangatahana famatsiam-bola ifarimbonana amin'ny tetikasa lalao fanao an-databatra eo amin'ny telo arivo eo ny Kickstarter. 30% monja amin'izy ireo ihany no mahatratra ny tanjona ary zara raha misy 5% no mahangona hatramin'ny 100 000 dolara mahery.
GV : Ahoana no izaranareo ny dikamitovy amin'ny mpijery anareo manerantany?
VK : Noho ny fitomboan'ny mpijery anay manerantany, manofa toeram-pamatsiana ao amin'ny kaontinanta efatra izay andefasanay ny lalao izahay. Ao Etazonia, Fanjakana Mitambatra, Aostralia ary Shina no misy izany. Alefan'ny mpaninjara entana misy azy ireo akaiky indrindra amin'ireo mpanjifa arakaraka ny toerana ny dikamitovy. Sarotra ity dingana fitsinjarana ity ary nila fiarahamiasa teo amin'ireo Shinoa mpamokatra sy ireo orinasa efatra hafa ao amin'ny kaontinanta voalaza mba handefasana ny entana amin'ny alalan'ny sambo – saingy tafiditra tanteraka ao anatin'ny asa izany ary mampiseho ny iray amin'ny fifandraisan'ny fantsona mpanitsy sy mpivarotra.
Tamin'ny resadresaka hafa [mk], nanamarika i Krstevski fa tsara vintana izy ireo nahavita ny dingana talohan'ny fametrahana ny Brexit [fr] sy ny fanantanterahana ny fampanantenan'ny filoha Amerikana vaovao hampitombo ny haban'ny fanditseranana amin'ny vokatra mivoaka ao Shina. Atahorana hampiakatra ny saran-dalana amin'ny fitaterana sy ny vidin'ny vokatra ireo fandrahonana ara-politika roa ireo.
Ireo mpilalao ao amin'ny “Cavern Tavern” noforonin'ny Txe Mico, nahazoana alalana avy amin'ny Final Frontier Games.
GV : Miaina ny zavatra ankafizinareo ianareo ary nataonareo ho fidiram-bola ny fialam-bolinareo. Inona no itiavan'ny olona ilay lalao fanao an-databatra ?
VK : Nivoatra be ny lalao fanao an-databatra hatramin'ny nisian'ny Monopoly na Risk ary miha-malaza hatrany. Tao anatin'ny folo taona, nitombo avo folo heny ny fandrosoan'ity indostria ity. Amin'ny ampahany betsaka dia noho ny filàna fifandraisana eo amin'ny olona no anton'izany, indrindra fa “maka” sehatra betsaka hatrany eo amin'ny fiainantsika ny tontolo virtoaly.